Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် Roll Machine တွင် Coreless အိတ် ထုတ်လုပ်သူနှင့် Roll Machine တွင် Coreless အိတ် ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
ပုံစံ - STR-VC-ATP Series
အောက်ခြေအလုံပိတ် အပေါက်ဖောက်ခြင်း အမှိုက်အိတ်ကို လိပ်ပြုလုပ်သည့်စက်ပေါ်ရှိ Coreless Fold ဖြင့် အုပ်ထားသည်။-လိုင်းအလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးမှုစနစ်(Rotary sealing နှင့် Servo Co-မြန်နှုန်းစနစ်)
အိတ်အရှည်သို့ ရိုးရှင်းသော လှည့်ကွက်&ဒစ်ဂျစ်တယ်စခရင်ပေါ်တွင် တစ်ချက်ထိခြင်းဖြင့် တင်းအား.
Dual fold device တွေအတွက်ပါ။”v”ပုံသဏ္ဍာန်; ”ဂ”ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်”2V”ပုံသဏ္ဍာန်ခေါက်.
ခေါက်အမျိုးအစားနှင့် မွေးစားခြင်းအတွက် လွယ်ကူသောပြောင်းလဲမှု ၃-လျင်မြန်ပြီး စွမ်းအင်ချွေတာရန်အတွက် axis transmissive လျှပ်စစ်မော်တာ.
ပုံနှိပ်ခြင်းအမှတ်အသားလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော Perforated pitch ဖြစ်နိုင်ခြေ.(ရွေးချယ်ခွင့်)
လေးလံသော မော်တော်ကား ရုတ်သိမ်းရေး-Edge Position Control ဖြင့် ဖြေလျှော့ပါ။.
Multi servo co-မြန်နှုန်းစနစ်,ခေါက်နှင့်ဖောက်ထွင်းမှုအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်တင်းမာမှု ဆက်တင်.
ထုတ်ကုန်များကို ရိုးတံတစ်ခုတည်း အကွေ့အကောက်ဖြင့် လှိမ့်သည်။,လိပ်သည် ချက်ခုံးမဟုတ်ပေ။.
STR-680VC-RB3S-ATP ၁ x ၃၈၀~680
Roll max.၁၁၀ 450~၂၀၀၀/
STR-850VC-RB3S-ATP ၁ x ၅၄၀~850
STR-1000VC-RB3S ၁ x ၆၈၀~1000
၌-line mark အာရုံခံကိရိယာ
စိတ်ကြိုက် Perforated pitch
PC အလိုအလျောက်အပူကုဒ်စနစ်သည် အော်တိုပက်ကေ့ခ်ျစနစ်အတွက်ဖြစ်သည်။.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/coreless-bag-on-roll-machine-1.html
ကြေးစားအဖြစ် Roll Machine တွင် Coreless အိတ် စက်ရုံနှင့်အတူထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, Taiwanကျနော်တို့ထူးခြားပြောင်မြောက်ထောက်ပံ့ Roll Machine တွင် Coreless အိတ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်ကုန်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့်အညီရှိကြ၏။ စိတ်ဝင်စားပါက, ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်။
Roll Machine တွင် Coreless အိတ် ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုဝယ်ပါ။ Roll Machine တွင် Coreless အိတ် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan တွင်ရှိသောစက်ရုံ